नासाको यानभन्दा नेपालको रेलको चर्चा, Hamro Bhaktapur "A Complete information about Bhaktapur and its People"
नासाको यानभन्दा नेपालको रेलको चर्चा - Onlinekhabar Aug 7, 2012
२३ साउन, काठमाडौं । नासाले मंगलग्रहमा सफलतापूर्वक यान अवतरण गराएकै दिन सोमबार नेपालमा अनौठो घटना भयो । यसअघि कसैले नसुनेको र नदेखेको घटना थाहा पाएर सबै चकित परे । नेपालमा यस्तो भयो रे भनेर सुनेका विदेशीहरु पनि तीनछक परे । घटना हो, जनकपुर-जयनगर चल्ने रेल सेवाको ।
जयनगरबाट हजारभन्दा यात्रु बोकेर सोमबार दिउँसो साढे तीन बजे रेल जनकपुरको लागि छुट्नै लागेको थियो । रेलका डिब्बामा यात्रुहरु बस्दैथिए । इन्जिन र डिब्बालाई जोड्न बाँकी थियो । रेल चलाउने समय हुन लागेको बेला चालक इञ्जिनको आवश्यक काम गर्दै थिए । स्टार्ट गरेर सामान मिलाउन खोज्दा रेल गुड्यो । यात्रु र चालकले तल बसेर लिकमा उभिएर हेर्दाहेर्द ईञ्जिन फिलिलि कुद्यो । सबै आत्तिए, कराए । लौ है चालक नभएको रेलको इञ्जिन गुड्यो भनेर सबैतिर खबर गरे । रेलको लिक वरपर हेर्नेहरुको घुईंचो लाग्यो । यसअघि निकै कर्कश स्वरमा विस्तारै कुद्ने रेल अहिले मुर्कुटाजस्तो फिलिलि कुदेको देख्दा सबै चित खाए । सुरक्षाकर्मी, रेलका कर्मचारी, स्थानीयबासिन्दा चालकविना कुदेको रेलको ईञ्जिन रोक्ने प्रयासमा जुटे । झण्डै २९ किलोमिटर कुदेपछि जनपुर पुगेर मात्र रेलको इञ्जिन रोकियो । बल्ल सबैले लामो सास फेरे ।
त्यति लामो यात्रामा मान्छे बिनाको रेल कुद्दा समेत धन्न दुर्घटना भएन । सातवटा स्टेशन, दर्जनौं, गाउँवस्ती र पूलपुलेसा पार गर्दै इन्जिन सुरक्षित रुपमा जनकपुर पुगेको हो । चालकको लापर्वाहीले घटना भएको भन्दै सरकारी निकायले अहिले यसको छानवीन थालेको छ ।
कसरी गुड्यो रेल ?
रेलका चालक रफिक कबारीका अनुसार जनकपुरबाट जयनगर पुगेको रेलको इञ्जिनलाई फर्काएर स्टार्ट गर्न खोज्दा एक्कासी फुत्केको हो । स्टार्ट गरेर सामान मिलाउन खोज्दा रेल गुडेको उनको भनाई छ । तर जनकपुर पुग्दा इञ्जिन न्युट्रलमा रहेको भेटियो । ‘न्युट्रलमा रहेको इञ्जिन गुडेको पत्याउन सकिन्न, पक्कै पनि गियरमा रहेको हुनुपर्छ’ रेल विभाग काठमाडौंका इञ्जिनियर रोशन ज्ञवालीले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो ।
जे जसरी भएपनि विना चालक रेल कुद्यो । तर त्यति लामो २९ किलोमिटर आफैं गुड्दा पनि रेलले लिक किन छोडेन होला ? ‘रेलको लिक सिधा हुन्छ, त्यसैले सिधा हुने भएकाले स्टार्ट गरेर छोडेपनि इञ्जिन सोझो अगाडि बढ्दा केही नभएको हो’ इञ्जिनियर ज्ञवालीले भन्नुभयो -’यदि लिकमा गाइवस्तु या मान्छे कोहीसित ठोक्किएको भए ठूलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो ।’
लिकको वरपर गाउँवस्ती रहेकाले मान्छे र गाईवस्तुको चहलपहल हुने भएपनि रेल आउने बेला र रेल कुराएको सुनेपछि सबै लाखापाखा लाग्छन् । सोमबार पनि रेल आउने बेला पनि परेको र आवाज पनि सुनिएकाले मान्छे लाखापाखा लाग्दा दुर्घटना नभएको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
त्यसमाथि जनकपुर-जयनगर चल्ने रेलको लिक निकै पुरानो छ । कहिलेकाहीँ यात्रुले खचाखच भरिएको रेल लिकबाट बाहिरिने गरेको पनि छ । तर सोमबार भने यस्तो भएन । किन ? ‘किनकी ईञ्जिन मात्र भएकाले रेल हलुको थियो, त्यहीकारण लिकबाट छुट्टनिे सम्भावना पनि भएन र छिटो पनि कुद्यो ।’
विदेशमा त अझ चालक विनाको रेल पनि हुने ज्ञवालीले बताउनुभयो । ‘अरु गाडीमा जस्तो रेलमा स्टेरिङ घुमाउन पर्दैन । स्टार्ट गर्ने, स्पीड कन्ट्रोल गर्ने र रोक्ने मात्र हो’ ज्ञवालीले भन्नुभयो -’चालकले स्टेरिङ घुमाएर मोड्न नपर्ने भएकाले इञ्जिन आफैं कुद्न सफल भएको हो ।’ उहाँका अनुसार डेनमार्क लगायतका विकसित देशमा चालक विनाको रेल हुन्छ । जहाँ स्टार्ट गरेर छोडेपछि यात्रुले खचाखच भरिएका रेल निश्चित दूरीमा पुगेर आफैंमा रोकिन्छ ।
तर सोमबार जनकपुर-जयनगर चल्ने रेल भने लापर्वाहीका कारण चालक विना कुदेर सबैलाई तीनछक पारेको हो ।